Sawirka Labo Jiir Oo Legdamaya Oo Noqday Sawirkii Ugu Cajiibsanaa Dunida - Borama News Network %
Sawirka Labo Jiir Oo Legdamaya Oo Noqday Sawirkii Ugu Cajiibsanaa Dunida
Qof walba oo ku safray qadka tareennada dhulka hoostiisa ah ee London wuu yaqaannaa kuwan – waa jiirka yar ee madow, oo ka soo baxa qeybaha hoose.
Sawirkaas wuxuu horseeday in Sam uu ku guuleystay abaalmarinta sawirrada xayawaannada ee sannadka, taas oo ay bixiso LUMIX People’s Choice.
“Mar walba waan qaadaa sawirro cajiib ah, kanna nasiib ayaan u yeeshay, laakiin shan habeen ayey igu qaadatay inaan helo, dabcanna way ii qorneyd inaan ugu dambeyn ku guuleysto”, ayuu yiri Sam.
Sir Michael Dixon, oo ah agaasimaha madxafka ayaa sawirka guushu ay raacday ka yiri: “Sawirka Sam wuxuu na tusayaa sida cajiibka ah ee ay xayawaannadu ugu dhaqmaan meelaha ay bani’aadanka joogaan. Dhaqanka ay labada jiir sameeyeen wuxuu la mid yahay waxyaabaha aan maalin kasta sameyno, sida gaadiidka aan istcmaalno iyo raashinka aan cunno. Waxaan rajeynayaa inay dadka dhiirrigaliso ayna wax badan kasii fikiraan xiriirkaas”.
Tartanka 56-aad ee abaalmarinta sawirrada xayawaannada waxaa hadda go’aankiisa gaara koox khubaro ah, tartamaha ugu sarreeya waxaa lagu dhawaaqi doonaa bisha October.
Wafti Ka Socda Dawlada Somaliya Oo Shir Kagaga Qayb Galaya Dalka Uganda
Shaqaalaha Wasaarada Caafimaadka Somaliland Oo Heegan Buuxa La Galiyay
Madaxwayne Ku Xigeenka Puntland Oo Ku Dhawaaqay Digniin Ka Dhan Ah Somaliland
Warbaahinta Gobolka Awdal Oo Ka Hadashay Tacadiyada Lagula Kaco Warbaahinta Fariina U Dirtay Muuse Biixi
“Madaxwaynaha Iyo Xisbiyada Mucaaridkuba Waxaan Ugu Baaqayaa In Iscasilaan ” Siyaasi C/qaadir Obsiiye
Ruuska Oo Ku Gacan Saydhay Xabad Joojinta Golaha Amniga Ee Dalka Suuriya Xaalada...
Deg Deg :- Xisbiga Ucid Oo Xilkii Ka Qaaday Siyaasi Ramaax Oo Dhawaan...